Samsung Archives — Page2of3— Anycall Mobile
တတိယမြောက် Unpacked Event တစ်ခုကိုပြုလုပ်လာဦးမယ့် Samsung
(Unicode) Samsung အနေနဲ့ မကြာသေးခင်က ဒုတိယမြောက် Unpacked Event ကိုကျင်းပပြီး Galaxy Z Fold2ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။အခုမှာလည်း နောက်ထပ် Virtual Unpacked Event တစ်ခုကို September 23…
ဖောက်ထွင်းမြင်နိုင်တဲ့ Display နဲ့ ဖုန်းတစ်လုံးကို မူပိုင်ခွင့်တင်လိုက်တဲ့ Samsung
September 7, 20202Mins Read
(Unicode) အခုနောက်ပိုင်းမှာ စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ ဆန်းသစ်လှတဲ့ Design နဲ့ဖုန်းတွေကို ထုတ်ဖို့ ထိုးဖောက်လာကြတာကိုအားလုံးသိပြီဖြစ်မှာပါ။ ဥပမာအနေနဲ့ပြရရင်ဆို Foldable ဖုန်းတွေကိုပဲပြရမှာပါ။အရင်ကဆို Foldable ဖုန်းတွေဟာ သိပ္ပံကားတွေထဲတွေ့ရတဲ့ ဖုန်းတွေလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ အခုမှာတော့ကျွန်တော်တို့မျက်စိရှေ့မှာတင် ဒီ Foldable ဖုန်းတွေကိုတွေ့ရခဲ့ပါပြီ။ အခုလည်း…
September 6, 20202Mins Read
(Unicode) အခုလက်ရှိအချိန်ဟာ Samsung S21 or S30 Series ကိုတွေ့ရဖို့ အချိန်အဝေကြီးလိုနေပေမယ့်လည်း အခုမှာတော့ ဖုန်းရဲ့ Specs တစ်ချို့စထွက်လို့လာနေပါပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Specs တွေကိုတော့ 3C Certification Site ကနေထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။ ဒီ…
Galaxy A42 5G သို့ Samsung ရဲ့ဈေးအသက်သာဆုံး 5G ဖုန်းတစ်လုံး?
(Unicode) လွန်ခဲ့တဲ့ ဇွန်လ ၃၀ ရက်နေ့လောက်တုန်းက Samsung အနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ A-Series ထဲက A42 5G ကို မိတ်ဆက်ဖို့ရှိနေတယ်လို့ သတင်းတွေထွက်ထားတာရှိပါတယ်။ အခုမှာတော့ Samsung အနေနဲ့ A42 5G…
၂၀၂၀ အစောပိုင်းလောက်တုန်းက Samsung အနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ Foldable Smartphone Lineup ကို တိုးချဲ့ဖို့ပြုလုပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်း သတင်းတွေထွက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ၂၀၂၀ ဖေဖော်ဝါရီအရောက်မှာတော့ Galaxy Z Flip ကို ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ August…
Galaxy Z Fold2သို့ Foldable ဖုန်းတွေထဲမှာ အကောင်းဆုံးဖုန်း??
August 26, 20202Mins Read
Galaxy Fold နဲ့အတူ Foldable ဖုန်းလောကထဲကိုစတင်ခြေချလာတဲ့ Samsung ကတော့ Foldable ဖုန်းလောကမှာ ဆက်ပြီး ခေါင်းမော့နိုင်စေဖို့ Galaxy Z Fold2Foldable ဖုန်းအသစ်ကို ထပ်မိတ်ဆက်လိုက်ပါပြီ။ ဖုန်းဟာ မိတ်ဆက်ပြီးအဆင့်မှာပဲရှိသေးပြီး…
Galaxy Note 20 Series လည်းထွက်ပြီးသွားပြီမလို့ Samsung အနေနဲ့ Samsung Galaxy S21 ဒါမှမဟုတ် S30 ကိုပြုလုပ်ဖို့စီစဉ်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုမှာလည်း Galaxy S21 Ultra ရဲ့ Specs တွေပေါက်ကြားလို့လာခဲ့ပါပြီ။ …
Galaxy S20 FE 5G ကိုကိုင်ရဖို့နီးလာပြီလား?
Samsung အနေနဲ့ ဒီနှစ်ကုန်လောက်မှာ သူတို့ရဲ့ Flagship ဖုန်းအသစ်တစ်လုံးဖြစ်လာမယ့် Galaxy S20 FE 5G ကို ထုတ်ဖို့စီစဉ်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာ Specs မှတော့ သေချာမသိထားရပေမယ့်လည်း အခုမှာတော့ ဖုန်းရဲ့ ပုံတွေ နဲ့…
Samsung ရဲ့ Exynos တွေလည်း Qualcomm ကို ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင်လာနိုင်တော့မှာလား ?
August 12, 20202Mins Read
အမေရိကန် – တရုတ် စီးပွားရေးစစ်ပွဲပြင်းထန်လာမှုနဲ့အတူ Huawei ကို Ban ထားတဲ့ကာလကို 2021 အထိတိုးမြှင့်လိုက်ပါပြီ။ စည်းကမ်းတွေကိုလည်း ပိုမိုတင်းကျပ်လိုက်တာကြောင့် US အခြေစိုက် Third-Party Semi-Conductor ထုတ်လုပ်သူဖြစ်တဲ့ TSMC ကလည်း Huawei…
Specs တွေကလည်းမိုက်သလို ဈေးကလည်းမိုက်တဲ့ Samsung Galaxy Tab S7 & Tab S7+
မနေ့ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Samsung Galaxy Note 20 Series အတူ Samsung Galaxy Tab S7 & Tab S7+တို့ ဟာလည်းတရားဝင်ထွက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ Galaxy Tab S7 & Tab…
အသစ်ထွက်လာတဲ့ Galaxy Buds Live မှာ ဘယ်လိုအချက်တွေကများထူးခြားသွားမလဲ??
Samsung အနေနဲ့မနေ့ကတုန်းက Galaxy Unpacked Virtual Event တစ်ခုကိုကျင်းပခဲ့ပြီး Galaxy Note 20 Series, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Tab S7 series ၊…
အားလုံးစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ Samsung Galaxy Unpacked Event ကတော့အခုလေးတင်ပဲ ကျင်းပပြီးစီးသွားခဲ့ပါပြီ။ ဒီပွဲမှာ Samsung အနေနဲ့ Note 20 Series အသစ်ဖြစ်တဲ့ Note 20 Series နဲ့ အတူ Galaxy…
Samsung ရဲ့ Galaxy Z Fold2ပုံတွေ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီ …
လာမယ့် August5ရက်နေ့မှာ Samsung အနေနဲ့ Galaxy Note20 series, Galaxy Tab S7, Galaxy Watch 3, Galaxy Buds တို့နှင့်အတူ Galaxy Z…
Galaxy Unpacked 2020 မှာဘယ်လို ရင်ခုန်စရာ Products တွေထွက်လာမလဲ?
အားလုံးသိကြတဲ့ အတိုင်း Samsung ဟာ နောက်လ August ၅ ရက်နေ့မှာ Unpacked 2020 Event ကိုကျင်းပလာတော့မှာပါ။ ထိုပွဲမှာ Samsung အနေနဲ့ Devices အသစ် ၅ မျိုးကိုမိတ်ဆက်လာမယ်လို့ အတည်ပြုထားပါတယ်။…
Galaxy Note 20 ရဲ့ Mystic Green ပုံများပေါ်ထွက်လာ…
Galaxy Note20 နဲ့ပတ်သက်ပြီး အရင်ကထွက်ခဲ့တဲ့ပေါက်ကြားမှုတွေအရ ဖုန်းဟာ အရောင်သုံးရောင်ထွက်ရှိလာမယ်လို့ သိထားရပါတယ်။ ထိုအရောင်သုံးရောင်ထဲမှာMystic Bronze ၊ Mystic Bronze နဲ့ Mystic Green တို့ပါဝင်လာမှာဖြစ်ပြီး Mystic Bronze ၊ Mystic…